आठ बुँदे सहमति पछि डा. केसीले अनसन तोडे – Kadar News : Oneline Digital News:
आठ बुँदे सहमति पछि डा. केसीले अनसन तोडे
प्रकासित : २५ आश्विन २०७७, आईतवार १५:१५
२५ असोज, काठमाण्डौ । डा. गोविन्द केसीले २८औं दिनमा अनशन तोडेका छन् । चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधारको माग राख्दै अनशनरत डा. केसी र सरकारबीच भएको ८ बुँदे सहमतिपछि आज आइतबार बिहान डा. केसीले १९औं अनशन तोडेका हुन् ।
डा. गोविन्द केसीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कर्मचारी विकास नेपालीले जुस खुवाएर अनशन तोडाउँदै ।
उनले अनशन तोडनुअघि प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली, सरकारी वार्ता टोली, शुभचिन्तक तथा सहयोगीलाई धन्यवाद दिएका
थिए । अनशन तोड्नुअघि डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले सरकारसँग भएको ८ बुँदे सहमति पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
डा. केसीले ६ बुँदे माग राखेर जुम्लामा भदौ २९ गते अनशन थालेका थिए । स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको आईसीयू कक्षमा अनशनरत उनलाई नेपालगन्ज हुँदै असोज ६ गते काठमाडौं ल्याइएको थियो ।